Nhau - Chii chinonzi gudzazwi？
Karaoke michina mukuwedzera kune masipika, michina yemimhanzi yakakosha, mhando yeagudziri pachayo yakakoshawo. Iko kushanda kweKTV kunofanira kuve kwakabatana neyako saizi size uye zvekushongedza zvinhu. Nzvimbo dzakasiyana dzemakamuri dzinofanirwa kushandisa akasiyana emagetsi amplifaya. Teerera kuenderana kwesimba gudzazwi uye mutauri.
Simba rekusanganisa karaoke simba gudzazwi rakagadzirwa mudanho rekutanga kazhinji idiki, uye masipika anotsigira madiki maspika emagetsi ane hunyoro hwakanyanya. Dambudziko rakajairika kupindura kupopota. Icho chikonzero ndechekuti simba rekuchengetera harikwani kana iro vhoriyamu iri pamusoro, zvichikonzera kwakakomba chiratidzo chemasaini. Uye zvakare, kumonyanisa kwemukurukuri wekunzwa mutauri ndeye mhinduro, uye kukanganisa kunokudzwa kutenderera, zvichitungamira kumhinduro yekuchema. Mukutungamira, chikonzero chikuru chekupindura kupopota ndiko kukanganisa. Kuderedza kukanganisa kunogona kuderedza mukana wekupindura mhinduro. Zvisinei, hazvigone kutaurwa kuti hakuzovi nemhinduro yekuchema. Chete mune inowanikwa inowanikwa huwandu, kana iyo purofiti yakakura zvakakwana, zvinotungamira kune mhinduro kuchema. Ndokureva, karaoke simba gudzazwi rinofanira kusarudza yakakwira simba kure sezvinobvira. Nekudaro, iyo inokwidziridzira simba remagetsi gudzazwi, iyo yakasimba manzwi ekunzwa. Kuburikidza nezviitiko zvinoshanda, yega yega chiteshi mukati me8 Ω 450W inogona kusarudzwa.
Iyo kamuri isingasviki 18 mita metres iri yakanyatsogadzirwa-yakasarudzika echinyakare echo athari karaoke simba gudzazwi. Nekudaro, echinyakare maekisheni anokonzeresa kusava nechokwadi kwekurira kwemhedzisiro, uye mhedzisiro yekugadzirisa zvinodiwa zvemuenzi wega wega zvinogona kuita kuti maneja asazombokwanisa kuona zvinoitika munzvimbo yakabatana, inozoitawo kuti DJ anete. Chikonzero chechipiri chekushandisa gudzazwi remagetsi neDSP processor ndechekuti yechinyakare echo mhedzisiro yekugadzirisa chip ine yakamanikana frequency frequency mhinduro (isingasviki 8kHz) uye yakaderera sampling frequency, izvo zvinoita kuti ishaiwe ruzivo mune zvakatipoteredza zvinoda yakakwira magetsi kuburitsa. Iyo DSP's sampling frequency ye48K uye yakafara frequency renji ye20hz-23khz inounza zvirinani ruzha rwemhando uye nani ari epakati nepasi frequency frequency dynamics. Ndokusaka isu tisingakwanise kuimba vanhu, kana iko kushandiswa kweDSP simba gudzazwi, izwi ravo nekukasira rakashongedzwa, kukwezva kwemagineti, kunokwezva, kurira zvakanyanya.
Chikonzero chechitatu chekushandisa gudzazwi remagetsi neDSP processor ndechekuti DSP inoshanda processor inogona kuchengeta yakawanda dhizaini dhizaini, uye inogona zvakare kuunza chaicho chinoshandisika "reverb" mhedzisiro, ipa vatengi zvimwe k-ruzivo, nyatso kuziva iyo yekuzvishandira karaoke yevatengi, uye inoderedza zvakanyanya kudiwa kwebasa kwaDJ. Uye zvakare, ne otomatiki ekutanga basa reVOD system, iko kurira kwemakamuri epachivande kunogona zvakare kusvika pakutanga padanho rakaenzana. Kutaura chokwadi, mukamuri repachivande pazasi pe18 square metres, kana tikangoongorora mhando yeruzha, yakanyatsogadzirwa echinyakare echo mhedzisiro haisi yakaderera kune iyo yeDSP, asi inoratidzika kunge gobvu uye yakapfava. DSP ine zvishoma zvekunaka kwedhijitari, iyo isina kupfava zvakakwana. Kana iyo LPF yeDSP yakagadziridzwa kuita 8kHz, kuenzanisa pakati pezviviri kuri pachena. Musiyano mukuru uri mune yakaderera-frequency simba, kushinga uye ukobvu.
Iko kusarudzwa kweakabatana karaoke simba gudzazwi uye kumberi nekumashure kupatsanurwa kumisikidza zvakanyanya kunoenderana nezvinodiwa chaizvo zveimba yekushandisa. Kwemakamuri mukati me18 mita metres, zvinokurudzirwa kusarudza DSP yakasanganiswa karaoke simba gudzazwi rinenge 200W; yemakamuri ane nzvimbo inopfuura 18 mativi emamirimita kusvika makumi maviri neshanu metres, matatu chiteshi 200 W DSP karaoke simba gudzazwi inogona kusarudzwa kuti iwedzere mutauri wepakati senge yepakati bass revanhu izwi rinowedzera; imba yega yega ine anopfuura 25 mita metres inofanirwa kutariswa Zvinoenderana nechimiro chaicho chemba, izvo zvinhu senge kumanikidza kweruzha danho, kurira kwemunda zvakafanana uye kusimudzira munda kumisikidzwa zvinonyanya kutariswa. Simba rakakodzera rinosarudzwa nekubatanidza hunhu hwemutauri pamwe neshure kwesimba gudzazwi remukurukuri. Iyo yakawanda-chiteshi yakaderera-simba kumashure nhanho simba gudzazwi inogona kushandiswa kudzikisa mutengo weanobatsira weyepasi-simba mutauri.
Karaoke Inotakurika Microphone, Miracast Ratidza, Wireless Microphone Karaoke, Imba Mashiripiti Karaoke Player,